LED DISPLAY မှတ်တမ်းများ - JYLED
အငှား LED Display မျက်နှာပြင်
ပြင်ပ LED အငှား LED Display
အားကစားကွင်း ပြင်ပ LED မျက်နှာပြင်
Flexible LED Display မျက်နှာပြင်
LED အကြည် မျက်နှာပြင်
အငှား Indoor LED စခရင်
Outdoor LED Display အငှား
ပုံသေ Indoor LED မျက်နှာပြင်
ပြင်ပ LED မျက်နှာပြင်ပုံသေ
Super HD LED မျက်နှာပြင်
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် LED မျက်နှာပြင်
LED Ball မျက်နှာပြင်
LED Light Pole မျက်နှာပြင်
ပိုစတာ LED မျက်နှာပြင်
LED မျက်နှာပြင်သည် Huaping ပေါ်လာစေရန် အကြောင်းရင်းများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ
led screen သည် ယခုအခါ ပရိုမိုးရှင်းပုံစံတစ်ခုဖြစ်လာပြီး နေရာများစွာသည် led screen ကိုအသုံးပြုခြင်းမှခွဲထွက်၍မရပေ။ အကြောင်းမူကား၊
ဇန်နဝါရီလ 17, 2022	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
LED မျက်နှာပြင်အတွက် အဆက်မပြတ် လက်ရှိ drive circuit ၏ ဒီဇိုင်းပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှု
LED display သည် 1980 ခုနှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သော သတင်းအချက်အလက်ပြသမီဒီယာ အမျိုးအစားသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် dot matrix modules ကိုအသုံးပြုသည်။
ဇန်နဝါရီလ 14, 2022	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
1. LED display ၏ အဓိကဖွဲ့စည်းမှု (ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော synchronous full-color screen ကိုရယူခြင်း) 1. သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံဘောင်၊ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်
ဇန်နဝါရီလ 13, 2022	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
JYLED သည် LED လုပ်ငန်းတွင် အဘယ်ကြောင့် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာနိုင်သနည်း။
2021 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းမှစတင်၍ Micro LED ၏ရှာဖွေမှုရေပန်းစားမှုသည် မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် အဓိကနည်းပညာစာမျက်နှာများတွင် ခေါင်းကြီးပိုင်းများပြုလုပ်ထားသည်။ အမျှ
“Metaverse” သည် မျက်နှာပြင်ကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်စေသည်။ LED ဖန်သားပြင်များအတွက် နောက်ထပ် တိုးမြင့်ဈေးကွက်တစ်ခုလား။
မကြာသေးမီက၊ Metaverse ကိုမကြာခဏပြသခဲ့သည်။ metaverse လို့ ခေါ်တဲ့ ဟာ အစစ်အမှန်ကမ္ဘာနဲ့ အပြိုင် virtual world ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်၊ Metaverse သည်ဖြစ်သည်။
ကောင်းသော LED display သည် မတူညီသော အပူချိန်၊ မတူညီသော ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိရန် လိုအပ်သည်၊ အမျိုးမျိုးသော အခါသမယများတွင် ပုံမှန်အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး အပေါ်တွင်လည်း ကောင်းမွန်သော သက်ရောက်မှုရှိသည်။
LED အီလက်ထရွန်းနစ် display ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်မျိုးစိတ်
ယနေ့ခေတ်တွင် နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် LED အီလက်ထရွန်းနစ် ဖန်သားပြင်များကို နေရာတိုင်းလိုလို တွေ့မြင်နေရသည်။ လမ်းပေါ်ရှိ မီးတိုင်စခရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အငှား
ဇန်နဝါရီလ 12, 2022	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် LED display များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုကောင်းမွန်လာကာ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။
မင်းနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် LED Display ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
LED မျက်နှာပြင်သည် တောက်ပမှု၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းသော၊ ကြာရှည်စွာ သက်တမ်း၊ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသော ကြော်ငြာပြသမှုထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
LED display သည် LED dot matrix ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အီလက်ထရွန်းနစ် display တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စာသား၊ ကာတွန်း၊ ရုပ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုစသည့် အကြောင်းအရာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြသနိုင်သည်။
နိုဝင်ဘာလ 22, 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
LED မျက်နှာပြင်၏တောက်ပမှု မြို့တွင်း လမ်းဘေးကြော်ငြာ LED မျက်နှာပြင်၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် LED မျက်နှာပြင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် LED display ကုန်ကျစရိတ် HD LED Display ကိုရွေးချယ်ပါ။ indoor သေးငယ်တဲ့ pitch led display ပါ။ JYLED LED ပြသခြင်း LED display ထုတ်လုပ်သူများ LED display အမျိုးအစား LED အီလက်ထရွန်းနစ်မျက်နှာပြင် LED ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မျက်နှာပြင် LED ကြမ်းပြင်ကြွေပြားခင်း LED ကြမ်းပြင်ကြွေပြားမျက်နှာပြင် LED အသိဉာဏ်ကြမ်းပြင်ကြွေပြားမျက်နှာပြင် LED မီးတိုင်မျက်နှာပြင် LED module တွေ LED အငှားပြကွက် LED ကောင်းကင်မျက်နှာပြင် LED သေးငယ်သော pitch display လုံးပတ်မျက်နှာပြင်များ ဦးဆောင်သည်။ LED အသွားအလာလမ်းညွှန်မျက်နှာပြင် LED အကြည် မျက်နှာပြင် Meta-universe LED မျက်နှာပြင် သာမန်မျက်စိဖြင့် 3D LED မျက်နှာပြင် ပြင်ပ LED မျက်နှာပြင် ပြင်ပ LED ကြီးမားသောမျက်နှာပြင် ပျက်စီးနေသော LED မျက်နှာပြင်ကို ပြုပြင်ပါ။ အသေးစား LED မျက်နှာပြင် သေးငယ်သော LED မျက်နှာပြင် စတိတ်အငှားနောက်ခံနံရံ လမ်းဘေးကြော်ငြာ LED မျက်နှာပြင် ထိပ်တန်း LED Display ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခု ထိပ်တန်း LED dispaly အမှတ်တံဆိပ်ဆယ်ခု ထိပ်တန်း LED Display ကုမ္ပဏီဆယ်ခု ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော LED မျက်နှာပြင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် LED display အမျိုးအစားများ ပြတင်းပေါက် LED အကြည်မျက်နှာပြင်
ဘုရားရှိခိုးကျောင်း 4K HD LED မျက်နှာပြင်
P3.91 အငှား Indoor LED Display
P5 indoor led display မျက်နှာပြင်
အမိုက်စား Pixel Pitch LED မျက်နှာပြင်
ကျွန်ုပ်တို့သည် P2၊ p2.5 Fine-Pitch led display၊ P3၊ P4၊ p4.81၊ P5၊ P6၊ P8၊ P10 ရောင်စုံ HD led display၊ စင်မြင့်ငှားရမ်းခြင်းစီးရီး LED display indoor LED display များနှင့် ပြင်ပစီးရီးများ LED မျက်နှာပြင်၊ သင့်အား အရည်အသွေးမြင့်၊ မြင့်မားသော၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော LED display ထုတ်ကုန်များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီ၏ အဓိက LED full-colour display engineering ထုတ်လုပ်မှု၊ indoor series LED display, outdoor series LED display, stage အငှားစီးရီး LED display, floor tile interactive LED display, transparent screen, etc. JYLED တွင် တည်ငြိမ်သော အရည်အသွေး ကြည်လင်ပြတ်သားမှု အားသာချက်များ၊ ရုပ်ပုံ၊ ရောင်စုံအရောင်စုံ၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း၊ သက်သာသောစျေးနှုန်း။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာထံ ဆက်သွယ်ပါ။ + 86-13553831871
ပြင်ပ LED စခရင် အငှား
3D LED ရုပ်ထွက်
LED Floor Tile Display ၊
ပြင်ပ LED အကြီးစား Dispaly
အဆင့်အငှား LED Display
DJ Bar LED Display ၊
No.2505၊ Songbai လမ်း၊ Shiyan၊ Baoan ခရိုင်၊ Shenzhen၊ Guangdong၊ China
Facebook မှာ-,fInstagram ကို linkedin Whatsapp
LED Display တင်သွင်းသူ
Led Screen ကိုဝယ်ပါ။
Indoor Led Display ၊
မူပိုင်ခွင့် © 2010-2021 SHENZHEN JYLED Technology CO.,Ltd.